UXiaomi akayeki kwaye ulungiselela ukuvulwa malunga neevenkile ezili-10 eSpain | Iindaba zeGajethi
Kwaye kwakutsha nje ukuba siqinisekise iindaba malunga Ukufika ngokusemthethweni kweXiaomi eSpain kwaye iindaba zenkampani yaseTshayina ayiyeki ukufikelela kwinethiwekhi. Kule meko sineendaba ezimnandi kubo bonke abalandeli bebhrendi kwaye inenjongo yokuvula iivenkile ezi-1 ezisemthethweni kuyo yonke le ndawo.
Isithethi senkampani, uDonovan Sung, yenze kwacaca emva kokuvulwa kwevenkile ezimbini kwikomkhulu laseSpain eLa Vaguada Shopping Centre kunye nenye eXanadú Shopping Centre, ukuba kwezi nyanga zizayo siza kubona iivenkile ezintsha zeXiaomi ezisasazwe ngakumbi.
Ngokunokwenzeka ezi azizukuqala ukubonwa de kube ngunyaka ozayo u-2018, kodwa ngokuqinisekileyo ziindaba ezimnandi kuye wonke umntu zokuba abahlali kuphela naba babini baseMadrid. Impumelelo yentengiso entsha yeXiaomi Mi A1 okanye iXiaomi Mi Mix yindlela elungileyo yokwazi umdla omkhulu wabasebenzisi bezixhobo zale nkampani. Akungabazeki ukuba ixabiso lemali lihlala lihle kakhulu kwiXiaomi, ngoko akumangalisi ukuba abaninzi sele beyicinga ukuba yimbangi enamandla kwimarike yefoni.
Ukuba neevenkile ezintsha ezisemthethweni kwizixeko ezininzi kubonakala ngathi iya phambili ngohlobo lophawu, kuba yeyona ndlela ilungileyo yokuba abasebenzisi abaninzi bakwazi wena kwaye ekugqibeleni bathenge izixhobo kuwe. Asinguye wonke umntu onjalo kweli hlabathi lee-smartphones kwaye ukuba abayiboni kwiishelufa zamaziko okuthenga okanye kwiivenkile ezinkulu, abazi ukuba banokuthengwa kwi-Intanethi. Ngale ndlela, xa iivenkile ezisemthethweni zivulekile kwiindawo ezininzi, inkampani iya kuthatha ukubalasela ngakumbi kunangoku. Siza kubona ukuba ezi venkile zintsha ziphela zivulwa phi kwaye okona kubaluleke kakhulu, umthamo wentengiso abalawulayo ukuvelisa kunyaka wokuqala wentengiso esemthethweni apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UXiaomi akayeki kwaye ulungiselela ukuvulwa malunga neevenkile ezili-10 eSpain
I-Newskill Nix, zonke ii-headphone zomhlaba zokudlala imidlalo okanye ezemidlalo